सम्पर्कविहीन भनिएकी सांसद वली नेपालगञ्जको एक अस्पतालमा! - dautarimedia.com
सम्पर्कविहीन भनिएकी सांसद वली नेपालगञ्जको एक अस्पतालमा!
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वली सम्पर्कमा आएकी छन् । उनी नेपालगञ्जस्थित एक अस्पतालमा उपचाररत रहेको खुलेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय दाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेस काफ्लेले उनी सम्पर्कमा रहेको पुष्टि गरे । उनले आफूले फोन सम्पर्क गर्दा रिसिभ गरेको र आफूमा स्वास्थ्य समस्या आएर नेपालगञ्जमा उपचार गरिरहहेको बताएको प्रहरी उपरीक्षक सुरेस काफ्लेको भनाइ छ ।
‘उहाँ सम्पर्कविहीन भएको समाचारहरु पढेँ । त्यसपछि उहाँलाई फोन गरेँ । मेरो फोन उठाउनु भयो,’ प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले भने, ‘मेरो घाँटीमा समस्या आएकोले म नेपालगञ्जस्थित अस्पतालमा आएको छु भनेर मलाई भन्नु भएको छ।’
उनको अवस्था सामान्य रहेको भन्ने खबर प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । यसअघि उनले आफू निकटकै सांसदरुको फोन उठाएकी थिइनन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उनलाई संसदीय दलमा उपस्थित हुनको लागि सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएकी थिइनन् ।
उनी ३ दिन देखि नै सम्पर्क बाहिर रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले विश्वासको मत लिने तयारी गर्दैछन् । उनले सत्ता टिकाउन सांसद वलीलाई लोभ लालचमा पारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
Previous: चीनबाट आठ लाख डोज भेरोसेल खोप आज नेपाल आउँदै
Next: काठमाडाैं उपत्यकामा आजदेखि ५० वर्ष माथिका नागरिकलाई भेरोसेल खोप दिइँदै